ShweMinThar: နဂါး (Nāga) ဆိုသည်မှာ
နဂါး (Nāga) ဆိုသည်မှာ
နဂါး (Nāga) ဆိုသည်မှာ သက္ကတနှင့် ပါဋ္ဌိဘာသာ စကားဖြစ်ပြီး ဟိန္ဒူနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကျမ်းဂန်လာ အလွန်ကြီးမားသော မြွေကြီးများကို ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒဏ္ဍာရီများတွင် နဂါးသည် ခြေထောက်မပါပဲ မီးလျှံများကို အသက်ရှူသော ၊ ကြည့်လိုက်ရုံနှင့် လောင်းကျွမ်း ပြာကျသွားစေနိုင်သည့် မြွေ ပုံသဏ္ဌာန် သတ္တဝါ ဖြစ်သည်။ ၎င်းအစွမ်းကြောင့် မျက်စောင်းထိုး၍ ညှို့အားကောင်းသော မိန်းကလေးတို့ကိုလည်း နဂါးဟု ယခုထိတိုင် တင်စား ခေါ်တပ်သည်။ မြန်မာ နိုင်ငံတွင် ခြေထောက်ပါသော နဂါးကိုမူ နယားဟု ခေါ်သည်။ မြန်မာတို့က နဂါးနှင့် ပုံသဏ္ဌာန်နှင့် ဂုဏ်သတ္တိချင်း ဆင်တူသော အနောက်တိုင်း နှင့်တရုတ် (Dragon) များကိုလည်း နဂါးဟုပင် အလွယ် တကူ ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။
နဂါးခေါင်းသည် ဒရယ်ချိုကဲ့သို့ ချိုရှိသည်။
နဂါးမျက်လုံးသည် နတ်မိစ္ဆာမျက်လုံးနှင့် တူသည်။
နဂါးလည်ပင်းသည် မြွေနှင့် တူသည်။
နဂါးအကြေးသည် ငါးကြင်းအကြေးခွံနှင့် တူသည်။
နဂါးလက်သည်းသည် လင်းယုန်ငှက်လက်သည်းနှင့် တူသည်။
နဂါးဖဝါးသည် ကျားဖဝါးနှင့် တူသည်။
နဂါးနားရွက်သည် နွားနားရွက်နှင့် တူသည်။
ကဌမုခ နဂါး = (ထိုနဂါး ကိုက်လျင် အဆစ်အမျက်များ မကွေးမဆန့်နိုင်တော့ဘဲ သံတံကျင်လို ခိုင်ခံ့မာကျောသွားသည်။)
ပုတိမုခ နဂါး = (ထိုနဂါး ကိုက်လျင် ပိန္နဲပုပ်လို အသားထဲမှ အရည်များ ယိုထွက်ကျလာသည်။)
အဂ္ဂိမုခ နဂါး = (ထိုနဂါး ကိုက်လျင် လူ၏ အသားတွေသည် မီးလောင်သလို အက်ကွဲလာသည်။)
သတ္တသုခ နဂါး = (ထိုနဂါး ကိုက်လျင် လူ၏ အသားတွေသည် မိုးကြိုးပစ်သကဲ့သို့ ကွဲပြတ် ပျက်စီးသွားသည်။)
ဂဠုန်ငှက်ဘေးမှ ကင်းဝေးသော နဂါးမျိုး ၇-ပါး
ပဏီတ တရာ-ဇလာဗုဇ, ဂဗ္ဘသေယျက, ဥပပါတိက, ဟုဆိုအပ်သော မိမိတို့ဇာတ်သဘောအားဖြင့် မြတ်သော နဂါးတို့လည်း တစ်မျိုး၊
ကမ္ဗလဿ တရာနဂါးစစ်သူကြီး, စစ်ဗိုလ်မှူး, စစ်ဘုရင်များဖြစ်ကြသော ကမ္ဗလနဂါး, အဿတရနဂါး တို့လည်းတစ်မျိုး၊
ဓတရဋ္ဌာ-ဓတရဋ္ဌမည်သော နဂါးဘုရင် တို့လည်းတစ်မျိုး၊
သတ္တသိဒန္တရ ဝါသိနော- တောင်စဉ်သီဒါ မဟာသမုဒ္ဒရာ၌ နေကြကုန်သော နဂါး တို့လည်းတစ်မျိုး၊
ပထဝိဋ္ဌကာ-မြေအတွင်း၌ မှီတင်းပုန်းအောင်းကာ နေလေ့ရှိကြကုန်သော မြေအောင်းနဂါး တို့လည်းတစ်မျိုး၊
ပဗ္ဗတဋ္ဌကာ-တောင်ခေါင်း တောင်တွင်း၌ မှီတင်းနေထိုင်ကြကုန်သော တောင်တွင်းနဂါး တို့လည်းတစ်မျိုး၊
ဝိမာနဋ္ဌကာ-ဘောဂဝတီ နဂါးပြည်၌ရွှေငွေဗိမာန် စံအိမ်ပျံဖြင့် ဇိမ်ခံပျော်ပါး၍ နေကြကုန်သော နတ်နဂါး တို့လည်းတစ်မျိုး။
လူသဏ္ဍာန်ဖန်ဆင်းပြီး နတ်ဝတ်တန်ဆာ ဝတ်ဆင်ထားသော နဂါးများကို ဘူရိဒတ္တနဂါးများ ဟုခေါ်သည်။ ဘူရိဒတ္တနဂါးမင်းများသည် လူမိန်းမများနှင့် အတူနေလျှင် နဂါးမှန်းမသိအောင် နဂါးသဏ္ဌာန်နှင့် မနေဘဲ လူသဏ္ဌာန်ဖန်ဆင်းပြီး နတ်ဝတ်တန်ဆာနှင့် နေကြသည်။ ထိုနဂါးတို့သည် အမြဲ လူသဏ္ဌာန်ဖန်ဆင်းပြီး နေလို့မရပါ။
၁။ နဂါးမများ ကိုယ်ဝန်ရှိလာသောအခါ၊
၃။ ဇာတ်တူသော နဂါးချင်း မေထုန်မှီဝဲသောအခါ၊
၄။ ကိုယ်လွတ်လက်လွတ် အိပ်ပျော်နေသောအခါ၊
၅။ သေသောအခါ များတွင် နဂို နဂါးရုပ် ပြန်ပေါ်လာသည်။
အိုင်ကြီးများ၊ သမုဒ္ဒရာကြီးများ၊ တောင်ကြီးများ၏ အောက်မှာလည်း နေတတ်သည်။
ဝေဘာရတောင်၏ အောက်တွင် မြေနေနဂါးများနေသည် ယူဇနာ(၅၀၀)ရှိသော နဂါးပြည် ရှိသည်။
ဟိမဝန္တာတော ဒဒ္ဒရတောင်ခြေတွင် မြေနေနဂါးများနေသည် နဂါးပြည် ရှိသည်။
မြင့်မိုရ်တောင် ခြေရင်းတွင် ရေနေနဂါးများနေသည်။
ဂယာမြစ်မှာ အဂ္ဂိဒဎု နဂါးနေသည်။
ဟိန္ဒူဘာသာတွင် နဂါးသည် အနှုတ်လက္ခဏာ ဆောင်သော သတ္တဝါဖြစ်ပြီး မြွေနဂါးယစ်ပူဇော် စတေးမှုနှင့် ဂဠုန်၏အစား ခံထိုက်သူများ အဖြစ် ဖေါ်ပြကြသည်။ ထို့အတူ ကျမ်းဂန်တွင် အလွန်အရေးပါသော ဇာတ်ကောင်များဖြစ်ကာ တခါတရံတွင် နတ်ဘုရားတို့၏ ဘက်တော်သားများလည်း ဖြစ်ကြ ပြန်သည်။ ဥပမာ နဂါးမင်းသား အနန္တ စကြာ (Ananta-Shesha)သည် မိမိကိုယ်ကို လူအသွင်ဖန်ဆင်း၍ ကောင်းသောဆံထုံး နှင့် သင်္ကန်း ဝတ်ဆင်က မြင့်မြတ်သော ရသေ့အကျင့်ကို ကျင့်၏။ ထိုအခါ ဗြဟ္မာမှ လွန်စွာ နှစ်သက်သဖြင့် ကမ္ဘာမြေကြီးအား သယ်ဆောင် ထမ်းပိုးရန် တာဝန်ပေး လိုက်သည် ဟုဆိုသည်။ နဂါးမင်းသားလည်း နဂါးအသွင်ဖြင့် တွင်းနက်ကြီး အတိုင်း မြေအဆုံးထိ ဆင်းကာ ကမ္ဘာကြီးအား ခေါင်းပေါ် တင်ထားလေသည်။ ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာပျက်သည့် အချိန်ကျရောက်တိုင်းတွင် ထိုနဂါးမှာ အသက်ဘေးမှ လွတ်ကင်းကာ အတိုင်းအဆမရှိ အသက်ရှည်သူ "အနန္တ" ဟူသောဘွဲ့ကို ရသည်ဟု ဆိုထားသည်။
မဟာဗြရတ္တကျမ်းတွင် ညီအစ်ကို ဝမ်းကွဲ တော်စပ်သူ နဂါးနှင့် ဂဠုန်တို့၏ ရန်ညှိး ဖွဲ့တည်ပုံ အားလည်း ဖေါ်ပြထားသည်။ ဖန်ဆင်းရှင်ဗြဟ္မသည် ကမ္ဘာနှင့် သက်ရှိသက်မဲ့ တို့အားဖန်ဆင်းရာတွင် ကူညီရန် ရီရှိ(rishi)ခေါ် ပညာရှိကြီး၁၀ဦးအား ဦးစွာ ဖန်ဆင်း သည်။ ထို၁၀ဦးအနက် ကရှက်ပ(Kashyapa) မှာ တစ်ဦးအပါအဝင် ဖြစ်ပြီး ဗိနတ္တ (vinata) နှင့် ကဒရူ (kadru) ဟူသော ညီအမ တော်စပ်သူ မယားနှစ်ဦး ရှိသည်။ ဗိနတ္တမှာ ခွန်အားကြီးသော သားအနည်းငယ်သာ လိုချင်သူဖြစ်ပြီး၊ ကဒရူမှာ သားပေါင်း မြောက်များစွာကို တောင့်တသူဖြစ်သည်။ အချိန်တန်သော် ဗိနတ္တတွင် ဥနှစ်လုံးရ၍ နေနတ်သား နှင့်ဂဠုန်တို့ ပေါက်ဖွါးလာကြသည်။ ကဒရူတွင် ဥပေါင်းတစ်ထောင်ရ၍ နဂါးများ ပေါက်ဖွားလာကြသည်။
ဂဠုန်၏မိခင် ဗိနတ္တသည် ညီမဖြစ်သူ ကဒရူနှင့် မိုက်မဲသော အလောင်းအစားပြုလုပ်ရာမှ ရှုံးနိမ့်ကာ ကျွန်အဖြစ်ရောက်ရှိ သွားသည်။ ထို့ကြောင့် ဂဠုန်မှ နဂါးတို့ထံ ချည်းကပ် ကာကျွန်အဖြစ်မှ မည့်သည့်အရာနှင့် ပြန်လည်ဝယ်ယူ ရမည်နည်းဟု မေးမြန်းရာ နတ်ပြည်ရှိ မသေဆေး ပျားရည်ကို ဆောင်ယူ ရမည်ဟု ဖြေသည်။ ဂဠုန်သည် နတ်ပျား ရည်ကို အခက်အခဲအမျိုးမျိုး ကျော်ဖြတ်၍ ဆောင်ယူအပြီး နဂါးတို့အား ပေးကာ မသောက်သုံးမှီ ပူဇော်မှု အခန်းအနားပြုရန်ပါ လှည့်ဖြားတိုက်တွန်းသည်။ နဂါးတို့ ပူဇော်မှု ဆောင်ရွက်နေချိန် တွင်အိန္ဒြာသိကြားမှာ နတ်ပျားရည် အားပြန်လည် ဆောင်ယူသွားတော့သည်။ သို့သော် ပျားရည်အိုးမှ ဖိတ်စင်ကျ လာသော ပျားရည်စက် အကြွင်း အကျန် များမှာ မြက်ခင်းပြင် ပေါ်တွင် ကျန်ခဲ့ရာ နဂါးတို့ လျှာဖြင့်လျက် ရာမှ ထာဝရအသက်ကို ရလာသည် ဟုဆိုသည်။ ထိုသို့မြက်ကို လျက်ခြင်းကြောင့် မြက်ပင်တို့ဖြင့် ထိရှကာ လျှာနှစ်ခွ ဖြစ်ရသည် ဟုလည်း ဆိုထားသည်။
သရေခေတ္တရာ၊ ဗိဿနိုး၊ ဟန်လင်းကြီး စသော ပျူနိုင်ငံများ ထွန်းကားခဲ့စဉ်ကပင် နဂါးရုပ်များ ရှိခဲ့သည်။ ပျူလူမျိုးတို့ ဝတ်ဆင်ခဲ့သော လက်ဝတ်တန်ဆာများတွင် နဂါးရုပ်များပါဝင်ပေသည်။ လက်ကောက်၊ ခြေကျင်း စသော ပန်းထိမ်လက်ရာများတွင် နဂါးခေါင်း၌ အချွန်အမောက်များ ပါရှိပြီး ကိုယ်ထည်တွင် ရွှေနန်းလိမ်များဖြင့် ကျစ်ကာ ဖော်ထားသည်။
တကောင်းခေတ် မင်းခမ်းတော် ပစ္စည်းများတွင် နဂါးကွမ်းအစ်၊ ကလပ်တို့အပြင် နဂါးရုပ်ထုသည်လည်း ထီးသုံးနန်းသုံး အဆောင်အယောင်ပစ္စည်း တစ်ခုဖြစ်ပေသည်။
ပုဂံခေတ်တွင် နဂါးစသော အနုပညာအရုပ်များသည် မြန်မာဆန်ပြီး မြန်မာဟန် ပေါ်လွင်လာသည်။
အင်းဝ၊ တောင်ငူ၊ ညောင်ရမ်း ခေတ်များတွင်လည်း တံကဲများနှင့် သာသနိက အဆောက်အဦများ၌ နဂါး၊ နယားရုပ်များဖြင့် မွမ်းမံမှုများ ပေါကြွယ်လာသည်။
ကုန်းဘောင်ခေတ်တွင် ကနုတ်ပန်းနှင့် ယှဉ်တွဲကာ နဂါးရုပ်များကို သစ်ထွင်းပန်းပုများ ထွင်းထုလာကြသည်။
ခေတ်အဆက်ဆက်မှ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွား ဆင်းတုတော် ဘုဇင်္ဂါသန(မုစလိန္ဒာသန) ပုံတော်များတွင် နဂါးရုပ်တုများ သုံးခဲ့ကြသည်။ မုစလိန္ဒာအိုင်တွင် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ သီတင်းသုံးစဉ်က နဂါးမင်းက ပါးပျဉ်းမိုး၍ ထားပုံများကို ပြုလုပ် ကိုးကွယ်ခဲ့ကြသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးတို့သည် နေ့နံအလိုက် ရုပ်ပုံရုပ်တုများ ထုလုပ်ခဲ့ရာ စနေနံကို နဂါးရုပ်ဖြင့် အမှတ်အသားပြုကြသည်။ မြန်မာတို့သည် နဂါးကြီး၏ ဦးခေါင်းလှည့်ပုံ`နဂါးလှည့်´ အယူအဆအရ သုံးလတစ်ကြိမ် ဦးခေါင်းပြုရာအရပ် ပြောင်းသည့် ယုံကြည်ချက်ဖြင့်
(တော်၊ ကျွတ်၊ မုန်း = ရှေ့)
( နတ်၊ ပြာ၊ တွဲ = တောင်)
( ပေါင်း၊ ခူး၊ ဆုန် = နောက်)
( န၊ ဝါ၊ ဝါ = မြောက်) ဟု၍ပင် သတ်မှတ်ကြသည်။
ကမ္ဘာဦးအစက မြွေနဂါးကို ကိုးကွယ်မှုရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း ဗုဒ္ဓသာသနာ မထွန်းကားမီ ပုဂံခေတ်ကြိုကာလ သက္ကရာဇ် (၂၇၉)ခုနှစ်၊ ပုဂံခေတ် တောင်သူကြီးမင်းလက်ထက်တွင် နဂါးကိုးကွယ်မှုရှိခဲ့သည်။ နဂါးရုပ်တုကြီးကို စိတ်တိုင်းကျ ထုလုပ်စေပြီး ကိုးကွယ်ခဲ့သည် ဟုဆိုသည်။
နဂါးကို အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် နာဂါဟုခေါ်ပြီး၊ ဂျားဗားကျွန်းတွင် နိုဂိုဟုလည်း ခေါ်ကြသည်။ မလေးရှားသင်္ဘောသား ဒဏ္ဍာရီများတွင် နဂါးသည် ခေါင်းများစွာရှိသည် ဟုဆိုသည်။ မလေးရှားနိုင်ငံ ပါဟန်း(Pahang)ပြည်နည်ရှိ Chinniရေကန်ကြီးတွင် သီရိဂုမာမ်(Sri Gumum) အမည်ရှိ နဂါး နေထိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရှိ ကိုမိုဒို၊ ရင်ကာ၊ ဖလောရက်စ် နှင့် ဂီလီမိုတန်း နှင့် ပါဒါကျွန်းများပေါ်တွင် နေထိုင် ကျက်စားသော အဆိပ်အလွန်ပြင်းထန်သည့် ဖွတ်ကြီးတစ်မျိုးကိုလည်း ကိုမိုဒိုနဂါးဟု ခေါ်သည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် နဂါးသည် မြစ်၊ချောင်း၊ အင်းအိုင် နှင့် ရေတွင်း၊ ရေကန် များကို စောင့်ကြပ်သည်ဟု အယူရှိကြသည်။ ထို့အပြင် မိုးခေါ်ပေးသူများ လည်းဖြစ်သဖြင့် ကောက်ပဲသီးနှံများ ကိုအထွက်တိုးစေသူ ဟုလည်း ယုံကြည်ကြသည်။ သို့သော် ရေကြီး၊ ရေလျံခြင်း စသည့် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်များပါ ဆောင်ယူတတ်သည် ဟုလည်း ဆိုသည်။ ဒဏ္ဍာရီများ အရ နဂါးတို့မှာ လူသားတို့ မရိုမသေ ပြုသော အခါတွင်သာ အမျက်ထွက် တတ်ကြသည်။ အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းတွင် သီးနှံများအောင်မြင်ရန်နှင့် ကြီးပွါး တိုးတက်စေရန် နဂါးမန္တလ (Nagamandala) ဟူသော နဂါးပူဇော်ပွဲ များကျင်းပလေ့ရှိကြသည်။
ခမာဘာသာဖြင့် နဂါးကို (neak) ဟုခေါ်ကြပြီး ပစိဖိတ် သမုဒ္ဒရာအတွင်းတွင် နဂါးပြည် ရှိသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ နဂါးမင်းသမီးနှင့် ဗြဟ္မဏလုလင်တို့ ပေါင်းဖက်၍ ခမာလူမျိုးများ မွေးဖွါးလာသောကြောင့် နဂါးအနွယ်များ ဖြစ်ကြသည်ဟုလည်း ယနေ့တိုင် ဆိုကြသည်။ အန်ကောဝတ် ကဲ့သို့ ဘုရားများတွင် ခေါင်းခုနှစ်လုံးပါ နဂါး ရုပ်တုများ တွေ့ရပြီး နဂါးမျိုးနွယ်ခုနှစ်မျိုးသာမက သက်တန့်ရောင်စဉ် ခုနှစ်သွယ်ကိုလည်း ကိုယ်စားပြုသည် ဟုဆိုသည်။ ကမ္ဘောဒီးယား နဂါး ယုံကြည် မှုများတွင် ခေါင်းမဂဏန်း အရေအတွက် ရှိသော နဂါးမှာ အဖိုဓာတ် ဆောင်ပြီး ခေါင်းစုံဂဏန်း အရေအတွက် ရှိသော နဂါးမှာ အမဓာတ် ဆောင်သည်ဟု ဖေါ်ပြထားသည်။
မဲခေါင်မြစ် တစ်လျှောက်ရှိ လာအိုနှင့်ထိုင်း လူမျိုးများတွင်လည်း ရိုးရာ နဂါးယုံကြည်မှု ပေါင်းများစွာ ရှိကြသည်။ ထိုဒေသ ခံများသည် မြစ်ချောင်းများအား နဂါးမင်း ပိုင်စိုးသည် ဟုယုံကြည် သောကြောင့် အထွဋ်အမြတ် ထားကြသည်။ နှစ်စဉ် ငါးနှင့်လှေသင်္ဘော လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများတွင် အစဉ်အလာအရ နဂါးပူဇော်ပွဲ များကျင်းပ လေ့ရှိပြီး ရေလမ်းခရီးအား ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းစေသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။
အနောက်တိုင်းအယူအဆတွင်လည်း နဂါးရှိခဲ့သည်။ ရှေးယခင်အချိန်က နဂါးနှင့်လူတို့တိုက်ပွဲများဖြစ်ခဲ့ခြင်းနှင့် နဂါးစီးသူရဲကောင်းများအကြောင်း ဒဏ္ဍာရီများရှိသည်။ အနောက်တိုင်းအယူအဆအရ နဂါး၏ပုံသဏ္ဌန်မှာ ကြီးမားသော ဒိုင်နိုဆောကဲ့သို့ ခန္ဓာကိုယ်နှင့် အတောင်ပံပါဝင်သည်။
မြန်မာအယူအဆတွင် နဂါးပုံသဏ္ဍန်ကို မြွေခန္ဓာကိုယ်နှင့် ဦးခေါင်းတွင်အမောက်ပါရှိပြီး အမြီးမှာ ငါးကဲ့သို့ဖြစ်သည်ဟု ယူဆကြသည် … နဂါးရုပ်ထုများပြုလုပ်ရာတွင်ပင် ထိုကဲ့သို့ပြုလုပ်ကြသည်။
နဂါးများသည် မီးမှုတ်နိုင်ခြင်း အမြုတေပိုင်ဆိုင်ခြင်း အဆိပ်ပြင်းခြင်း မျက်စောင်းထိုးလျှင် အရာဝတ္ထုများပြာကျနိုင်ခြင်းစသည့် အစွမ်းများရှိသည်ဟု အရှေ့တိုင်းတွင်သာမက အနောက်တိုင်းတွင်ပါယူဆကြပါသည်။
ခန္ဓဝဂ္ဂသံယုတ် ။ပါ။ ၂ဝ၂ ။ဋ္ဌ။၃၁၉။ အပဒါန် ။ဋ္ဌ။ ပအုပ်၂၆၇။ သုတ္တနိပါတ် ။ပါ။ ၂၇၉ ။ဋ္ဌ။ ပ-အုပ်။၁၂-
ဓမ္မပဒ ဒုအုပ်။ ၁၅၂၊၁၅၃။ ဝိနည်းမဟာဝါ ။ပါ။ ၁၂၁ ။ဋ္ဌ။ ၃ဝ၄။ သုတ္တနိပါတ်။ပါ ၂၇၉ ။ဋ္ဌ။ ပ-အုပ်၊ ၁၂-၁၃။
အရှင်ကောဝိဒ (ယော)၏ မြတ်ပန်းရဂုံ ဘလောဂ့်မှ
ပါရာဇိကဏ်အဌကထာ၊ စတုတ္ထပါရာဇိက၊ တပေါဒါဝတ္တု
Credit - သုတဇုန်| Facebook
Posted by Alex Aung at 10:57 AM
၀က်သားနဲ့ ဂွေးသီးချဉ်ငံစပ် - ဆားငန်​သီး ငါးပေါင်း...
Olive Yang သို့မ​ဟုတ် ဘိန်းဘုရင်မ
⏩GYM မသွားခင်သိစေချင် (အပိုင်း-၂)⏪
အာလူးလုံးကြော် - ကြက်ဥ ကော်ပြန့် - ခရမ်းသီးကြော် -...
၀န်ထမ်းတွေရဲ့ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် Performance
တက္ကသိုလ်ကို ဘာကြောင့် တက်ရသလဲ
ဗီတာမင် ထမင်းထုပ် - အမဲသားလွှာနဲ့ ပန်းငရုတ်ပွကြော် ...
မာလကာ - နဂါးမောက် - ဒူးရင်း - ငှက်ပျော - ထောပတ်သီး...
စီးပွားရေးလုပ်ရာမှာ အကျိုးအမြတ်ရှိမရှိ တွက်ဆသင့်သေ...
မဲဇာတောင်ခြေ (MEZA HILL)
ချဉ်ငန်စပ်မှိုသုပ် - ဂျပန်တို့ဟူးသုပ် - သက်သတ်လွတ် ...
Diet လုပ်ရင် ဝိတ်ကျမှာလား (သို့) ပိန်သွားမှာလား?
အချိုမှုန့် (Monosodium Glutamate) သမိုင်းကြောင်း
ATM ကတ်တွေ ငွေထုတ်လို့ ထွက်မလာရင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ
Cardio တစ်မျိုးထဲ၊ ဥပမာ Gym မှာ ပုံမှန်ပြေးရုံနဲ့ ...
မိုးကုတ် (Ruby Land)